Wednesday,5Jun, 2019 8:47 AM
चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्व सम्हालेपछि केशव भट्टराईको पहलमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरसमेत बक्स अफिस प्रणाली शुरु गरिएको छ । हालै मात्र सर्लाहीको लालबन्दिमा अवस्थित वीणा चलचित्र मन्दिरबाट बक्स अफिस प्रारम्भ भएको छ ।
उनको योजना छ, आगामी साउनसम्म देशैभर यो काम सुचारु गर्ने । अर्काेतिर चलचित्र विकास कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी सम्पत्ति गायब बनाइएको तर्फसमेत बोर्डले एक्सन लिएको छ । कुनै समय २७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा अहिले ६ दशमलव ७५ रोपनीमा खुम्चिन पुगेको छ । ०२८ सालमा सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अन्तर्गत शाही नेपाल चलचित्र संस्थानको नामबाट स्थापना भई हाल कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको र नेपाली चलचित्रको ५० वर्षको इतिहास बोकेको यो ठाउँ व्यक्तिको नाममा पुग्दा त्यो इतिहास अहिले खरबारीमा परिणत हुने अवस्था छ ।
यो कम्पनी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा निजीकरण गरिएको थियो । एनएफडीसीको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी ६ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको हो । तत्कालीन लिज होल्डर डीबी थापाले उद्धव पौडेललाई लिजमा बेचेको जग्गा हो यो । जसको सम्झौता सकिएको थियो ०७१ सालमा । तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर उद्धवहरूले ४० बर्षका लागि कौडीको भाउमा हत्याएका हुन् ।
उद्धवको पोल्टामा यो जग्गा पुगेपछि न ठाउँको संरक्षण भयो, न सिनेमाको कामले गति नै लिन सक्यो ।
बरु त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत तलब खुवाउन नसकेर तन्नम पल्टियो । बीचमा बैंकले कालोसूचीमा समेत राख्यो यो कम्पनीलाई । अहिले यसको अध्यक्ष छिन् निकिता पौडेल छिन् । जसउपर औद्योगिक व्यवस्था समितिको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार विकास बोर्डले सनराइज क्यापिटल, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र एनएफडीसीलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ । त्यहाँ सर्वसाधारण शेयर कति छ ? र अन्य निकायको हिस्सा कति छ ? त्यस्तै यसको नेगेटिभलाई सुरक्षित राख्ने ढंगले काम अगाडि बढाइएको छ ।
यता, सरकारले काठमाडौंमा स्टुडियो निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि पर्याप्य जग्गाको खाँचो पर्छ । उद्धवको पोल्टाबाट खोसेर सोही जग्गामा सरकारले अत्याधुनिक फिल्म स्टुडियो निर्माण गर्ने सम्भावना प्रवल छ । बोर्डले अत्याधुनिक फिल्म स्टुडियोका लागि बालाजुसहित अन्य तीन स्थानमा जग्गा हेरिसकेको छ ।